Eedeymaha musuqmaasuq ee siyaasiyiinta xukunka ka tuurtay oo sii badanaya… – Hagaag.com
Eedeymaha musuqmaasuq ee siyaasiyiinta xukunka ka tuurtay oo sii badanaya…
Eedeymaha musuqmaasuqa ee loo jeediyo siyaasiyiinta ayaa noqotay isbeddel la taaban karo, waxay riday madax badan, arrintani ayaa ah tallaabo wanaagsan ee siyaasada dunida.
Sidaasi waxaa sheegtay Wargeyska Foreign Policy Magazine ee Mareykanka, warbixin ay ka diyaarisay madaxweynayaal iyo madaxda xukuumado oo xukunkii ka tuuray eedo musuqmaasuq kahor inta ayna dhameysan wakhtigii xukunkooda dhowrkii sano ee la soo dhaafay.
Lixdii bilood ee la soo dhaafay oo keliya waxaa musuqmaasuq xukunka ka tuuray madaxda lix dal sida dalalka Armenia, Malaysia, Peru, Slovakia, Koonfur Afrika iyo Spain.
Shantii sano ee ugu dambeysayna waxaa musuqu la tagay isbedelka hogaanka in ka badan 10% dowladaha caalamka, waxaa is casilay madaxdooda 21 dal ama kalsoonida lagala noqday kadib markii baaritaan lagu sameeyey.
Waxaa jira xiriir ka dhexeeya inta badan kiisaska, laakiin siidayntii waraaqaha Panama ee 2016 iyo baadhitaankii musuqmaasuq ee Brazil ayaa dhalisay fadeexado siyaasadeed tiro ka mid ah dalalka.
Sidoo kale waxaa qayb ka qaatay musuqmaasuqa ee ay guuldarada kala kulmeen siyaasiyiin weli xukunka ku fadhiyey, sida Ra’isul wasaaraha dalka Malaysia Najib Abdul Razak, sidoo kale Argentina, Benin, Costa Rica, Ghana, India, Nigeria, Sierra Leone iyo Sri-Lanka, Pakistan iyo Zimbabwe oo madaxda dalalkaasi ama xisbiyadooda la kulmeen guul darooyin sababo musuqmaasuq qeyb ka mid ah ama gebi ahaanba.
dalalka Xataa ka badbaaday siyaasiyiintooda ku eedeysan musuqa ayaa la kulmay go’doomin ama guul darro iyadoo dalalkaasi ay saameysay banaanbaxyo loogu soo horjeedo Musuqa kaasi oo gilgilay siyaasiyiinta sida dalalka Czech, Honduras, Iran, Malta iyo kuwo kale.